Isidumbu sikaNoxolo sitholakale ngemuva kwesonto eshonile | Scrolla Izindaba
Isidumbu sikaNoxolo sitholakale ngemuva kwesonto eshonile
Ngokusho kwabasebenzi bocwaningo ebebesendaweni yesigameko, bathi isidumbu sikaNoxolo Maqashalala obeneminyaka engama-44 sitholwe emzini wakhe ngemuva kwesonto eshonile mhla zi-12 kuNdasa.
Ngenkathi umndeni womlingisi ongasekho emhlabeni ubhekene nokugxekwa emphakathini, okhulumela umndeni uMfundusi uKabo Nyikiza uthe kwesinye isikhathi bekudlula amasonto amabili bengakaze bekhulume naye.
“Uma esebenza ujwayele ukuba matasa kakhulu,” esho.
Uthe baqale ukukhathazeka ngemuva kokuthi engaphenduli umakhalekhukhwini wakhe isonto lonke.
“Umfowabo uthumele umuntu ukuthi ayombheka ngoba ubengawuphenduli umakhalekhukhwini wakhe kodwa ngeshwa, abakwazanga ukungena ngaphakathi ngoba unogada akabavumelanga ukuthi bangene,” kusho uNyikiza.
“Unogada uqale abheke umhlali kuqala uma umhlali engaphenduli, isivakashi ngeke sivunyelwe ukuthi singene.”
Imbangela yokushona kube ukugula ngokwemiphumela yokuhlolwa kwesidumbu kanti uNyikiza ukuqinisekisile lokhu.
“UNoxolo ushone ngenxa yokugula. Akukho okunye,” kusho uNyikiza.
Lo mlingisi owake waba ngumlingisi we-Diamond City uzofihlwa KwaBacha e-Eastern Cape mhla zi-19 kuNdasa kanti inkonzo yakhe yesikhumbuzo izoba mhla zi-24 kuNdasa e-Market Theatre.
Umthombo wesithombe: @ News365